Daawo sawiro: Garoonka diyaaradaha ugu mashquulka badan oo mashaq
Daawo sawiro: Garoonka diyaaradaha ugu mashquulka badan oo mashaqo qabsatay
Georgia Power, which supplies the airport’s electricity, said it believed a fire at an underground electrical facility was to blame for the power cut. Officials said a piece of its switchgear could have failed and started the fire, causing cable damage.
Garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson oo ku yaalla magaalada Altanta ee dalka Maraykanka ayay korontadii ka tagtay taasoo sababtay in qayb ahaan la xiro, duulimaadyo badanna dib loo dhigo.
Garoonkan diyaaradaha ayaa ah midka ugu mashquulka badan adduunka oo dhan, waxaana maalinkasta adeegsada 250,000 oo rakaab ah iyo 2,500 oo duulimaad.
Dadkii safrayay ayuu mugdigu haleeyay iyaga oo qaarkood ay garoonka ku dhex jiraan kuwo kalana ay diyaaradaha saaran yihiin.
Diyaarado soo dagi lahaa ayaa garoomo kale loo weeciyay, kuwo kale oo ka duuli lahaana garoonka ayaa lagu sii hayay.
War qoraal ah oo uu garoonku soo saaray ayaa lagu sheegay in ay korontadu go’day Axaddii sagaalka ama saddexda fiidnimo Saacadda geeska Afrika.
Georgia Power oo ah shirkadda korontada siisa garoonka ayaa sheegtay in ay rumaysan yihiin inuu dhibkani ka dhashay dab ka kacay korontada dhulka hoosteeda marta ee garoonka.
Waxay sheegtay in aysan garanaynin waxa sababay dabka, balse ay rajaynayso in ay korontada soo celiyaan saqda dhexe ee Axadda wakhtiga deegaankaas.
Doodahan oo kale ka daawo Saafifilms.com
Noloshii qadhaadheyd Part 67 Musalsal Turki af Soomaali
Warka 01 01 2016 Gawaari lagu wareejiyay booliska Galmudug & xildhibaano….
London court extends injunction against Djibouti in DP World dispute -Dubai govt 14 Shares Share…
Warka 04 02 2017 Shacab & dad diimo kale ka socda oo usoo baxay Muslimiinta…